१० लाख दाइजो नदिँदा ह’त्या ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/१० लाख दाइजो नदिँदा ह’त्या !
१० लाख दाइजो नदिँदा ह’त्या !
विराटनगर मागे जति दा’इजो नदिएको भन्दै भगा’एर विवाह गरेपछि छोरीको ह’त्या भएको आरोप आफन्तले लगाएका छन्। सुनसरीको देवागंज गाउँपालिका ३ की २२ वर्षीय रिङ्की कुमारी मेहतालाई भगा’एर बिहे गरेको परिवारले मागेको १० लाख दाइ’जो नदिएको नाममा उनकै ह’त्या गरेको आ’रोप लागेको हो।
भदौ ३ गते सोही गाउँपालिका–४ निवासी रमेशकुमार मेहताले छोरीलाई अ’पहर’ण शैलीमा ज’बरजस्”ती भग’ाएर घर लगेको २४ घण्टा नबित्दै दाइजोको लागि हत्’या गरेको मृ’तकका बुवा जयकिशोर महतोको आ’रोप छ।
विराटनगरस्थित ईडन वर्ग कलेजमा बीबीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रिङकु भदौ १ गते गढी गाउँपालिका ४ स्थित छिटहामा रहेको दाजु जयप्रकाश मेहताको घर गएकी थिइन्।
गालामा ड’ण्डीफोर र दाँतको स’मस्या रहेकाले दाजुले विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा उप’चार गराएका थिए । उपचार पश्चात दुई दिन दाजुको घरमा बसेर उनले भदौ ३ गते बहिनीलाई फोन गरेर घर आउन लागेको जानकारी गराएकी थिइन्।
फोन गरेको केही समयपछि मोबाइल अफ हुँदा परिवार तन’ावमा थियो। पूर्वसभासद मुगालाल मेहताले राति ११ बजे फोन गरेर छोरी केटासँग भा’गेर आएको भन्दै तत्’काल आफ्नो घरमा आउन भनेका थिए।
आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मृ’त्तकका बुवा जय किशोरले भने, ‘राति पूर्वसभासदको घर १२ बजे पुगेँ। त्यहाँ पुग्न साथ छोरी भा’गेर के’टासँग आएकी छ, विवाह गरिदिनु पर्‍यो भन्दै द’बाब दिए।
उनले छोरीसँग एक पटक भेट्न खोज्दा पनि नदिएको गु’नासो गरे। उनलाई छो’री भग’ाएर लाने केटालाई १० लाख दाइ’जो दिएर बिहे गर्ने द’बाब पूर्वसांसद मेहताले नै दिएका थिए। यो द’ब’ाबपछि बिना छलफल फर्किएको उनको भनाइ छ ।
‘सभासदले फोन गरेर बोलाए तर छोरीसंग भेट्न दिएनन्’, उनले भने। उल्टै दाइजो दिन द’बाब दिएपछि आफू फर्केर आएको केही बेरमा छोरीलाई जिम्मा लगाएर रमेशको घर पठाएको थाहा पाएको उनले सुनाए।
रमेशको घर भदौ ३ गते म’ध्यरातमा पठाएकी छोरीले पा’सो लगाएर आ’त्मह’त्या गरेको भन्दै सभासद मेतहताले ५ गते बिहान राति ३ बजे फोन गरेर जानकारी दिएको उनले सुनाए । मेरा आफन्तलाई फोन गरेर पूर्वसभासद मेहताले सुनाएपछि आफूहरु गएको मृ’तकका दाजु जयप्रकाश मेहताले बताए।
सु’तेको कोठाको बरण्डामा प्लास्टिकको कुर्सीमाथि पा’सो लगाएको अवस्था हेर्दा ह’त्या गरेर पा’सो लगाई झु’न्ड्यिाएको आ”शंका उनीहरुले गरेका छन्।
बहिनीले घरबाट हिँड्दा लगाएका गहना नभएकाले पनि दाइजोकै नाममा ह’त्या भएको आ’शंका परिवारले गरेका छन्।
मृ’त्कको बसोवास रहेको वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष अनिल भगलले मृत्यु शंकास्पद रहेको बताए। ‘घट’नास्थ’लमा पुगेको प्रहरी र स्थानीयलाई बुझ्दा घट’ना शं’कास्पद देखिएको छ’, उनले भने, ‘पो’स्टमार्टम रि’पोर्टपछि स’त्य सार्वजनिक हुन्छ।
प्रहरीलाई त’त्काल नै खवर गरेपनि सुरुमा उ’जूरी नलिएको मृ’तकका बुवा जयकिशोरले बताए । ‘सुरुमा उ’जूरी नलिदा हुलाक मार्फत पठाएको छु’, उनले भने, ‘द’र्ता भयो कि भएन जानकारी छैन।
प्रहरीले छो’रीलाई भ’गाएर लग्ने रमेश र उनका दाजु उमेशलाई दुई दिन हि’रासतमा राखेर छोडेको छ। सुनसरी प्रहरी प्रमुख कमल थापाले आ’त्मह’त्या दु’रुत्सा’हन सम्बन्धी मु’द्दा दर्ता गरेर थप अ’नुस’न्धान सुरु गरेको जानकारी दिए।
दुई मु’द्दा लिएर आएको जानकारी दिँदै प्रहरी प्रमुख थापाले भने, ‘मृ’तकका श्रीमान र जे’ठाजुसहित अन्य परिवारका स’दस्यसंग अनु’सन्धानकै क्रममा सोधपुछ गरेका छौं’, उनले भने पो’स्टमार्टम रिपोर्ट आएको छैन। आ’रोपित बाहिर भए पनि रि’पोर्टका आधारमा प’क्राउ गर्छौँ।(अन्नपुर्ण पोष्ट बाट)
थप १७१ जनामा कोरोना सङ्क्रमण, २ को मृत्यु
दाङमा एकै दिन दिदी-बहिनीको मृत्यु, मनमा मायाँ भए RIP लेख्नु होला !
ह’राइरहेकी ९ बर्षिया बा’लिका ५ दिन पछी फे’ला
काठमाडौंको तारेकेश्वरस्थित एक फार्ममा बर्ड फ्लु पुष्टि